Fashilka Farmaajo ee Siyaasadda dibadda | KEYDMEDIA ONLINE
Fashilka Farmaajo ee Siyaasadda dibadda
Ma jiro dal kamid ah Khaliijka oo wanaag u haya Farmaajo, xitaa Qatar oo daba-dhilif u ahaa tan iyo doorashadiisii 2017.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladdii Xasan Sheekh waxaa lagu amaaney inay ku wanaagsanayd xiriirka dibadda, taasoo la xasuustay markii xukunka uu qabtay Farmaajo oo wixii horey loo dhigay lugta ku dhuftay.
Farmaajo wuxuu xiriirkii u jaray Kenya, oo ah dal ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan marka loo eego Wadamada kale ee ku yaalla gobolka Geeska Afrika.
Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa derbi dhex-dhigay labada dal oo xuduudooda labada dhinac dadka degan ay dhamaan yihiin Soomaali, sinna ukala go'i karin xiriirkooda ehelnimo.
Ganacsi xoog badan ayay Soomaalida ku leeyihiin dalka Kenya, gaar ahaan magaaladda Nairobi. Nasiib darrose. Farmaajo kama uusan fikirin dhibaaatada dhaqaale iyo burburka soo gaari Soomaalida.
Fashilka Farmaajo ee siyaadda arimaha dibada waxay khatar ku tahay hab-sami-u-socodka xiriirka Caalamiga ah ee Soomaaliya la leedahay dowladdaha kale.
Go'aankii ay Muqdisho ugu jartay dhammaan xiriirkii diblomaasiyadeed ee Kenya wuxuu ahaa go'aan deg deg ah oo la qaatay, kaasoo saameyntiisa laga dareemay labada dal.
Markii uu billowday Khilaafkii Khaliijka, maamulka Farmaajo wuxuu sheegay 2017 inuu dhex-dhexaad ka yahay dagaalka u dhaxeeya Xulufadda Sacuudiga iyo Qatar, laakiin uu go'aankaas isbedelay markii lala saftay Doha, oo Fahad Yaasiin u fadhiya Villa Somalia.
Siyaasadda gudaha iyo dibadda midna kuma fiicnayn Farmaajo, wuxuuna fashilkiisa horseeday inuu lumiyo taageeradii shacabka mudo gaaban, maadaama uu kasoo bixi waayay balan-qaadyadii uu u sameeyay markii la doortay.